EPL: Man United oo Old Trafford guul soo laabasho ah kaga gaartay Kooxda Middlesbrough, xilli Pogba uu guuldarro ka badbaadiyey United… + SAWIRRO – Gool FM
(Manchester) 31 Dis 2016 – Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa guul soo laabasho ah 2-1 kaga gaartay naadiga Middlesbrough oo ay ku soo dhowaysay garoonkeeda Old Trafford, kulan ka tirsan horyaalka Premier League.
Qeybtii hore ee kulankan ayaa lagu kala nastay barbaro goolal la’aan 0-0, inkastoo 39’daqiiqo Man United laga diiday gool uu u dhaliyey Zlatan Ibrahimovic, iyadoo lugtiisu ay gaartay goolhaye Victor Valdes.
Markii dib la isugu soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta Man United ayaa goolka looga naxsaday, waxaana kubbad uu madax ku baasay Alvaro Negredo, si wacan u dhammaystiray 67’daqiiqo Grant Leadbitter, kooxda Middlesbrough ayaana hoggaanka ciyaarta ku qabatay 1-0.
Man United ayaa goolka barbaraha la timid 85’daqiiqo, waxaana kubbad uu madax ku caawiyey Zlatan Ibrahimovic dhammaystiray Anthony Martial, kaasoo ciyaarta ka dhigay barbaro 1-1.
Kooxda Jose Mourinho ee Man United ayaa goolka ay guusha ku qaadatay la timid 87’daqiiqo waxaana madax ugu dhaliyey Paul Pogba, kaddib karoos uu dadab ka soo qaaday Juan Mata, kulanka ayaana ku soo dhammaaday 2-1 looga badiyey Middlesbrough.
Man United oo guul ku soo gabagabaysay sanadka 2016 oo caawa ku eg ayaa sidaasi ku fadhisa kaalinta 6-aad, iyadoo haysata 36-dhibcood 19 kulan oo ay ciyaartay.
Cesc Fabregas oo Rikoor Cusub ka dhigay Premier League